ပါလေရာ …ငပိချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » ပါလေရာ …ငပိချက်
Posted by naywoon ni on Sep 5, 2011 in Poetry | 12 comments
ငပိချက် ပါလေရာ …
ငါပါတတ်၏ ..။ ရွာအသိ………။
အဘနီ က တော့
ဘယ်သူ့ ကိုလည်း မသိ
မအီးတုံး နဲ့ 
နွယ်ပင် တို့ ကတော့
ကျွန်တော် လည်း သိချင်ပါ၏
ဒီနေ့ ကဗျာနှစ်ပုဒ်တင်တာ တော်ကာရေ……… ပထမတင်တဲ့ တစ်ပုဒ်က ခုထိမတက်သေးဘူး…။ အယ်ဒီတာ အက်ဒစ်လုပ်တုန်းလားမသိဘူး ကိုယ့်မှာ ထလို့ မရသေးဘဲဆက်ထိုင်စောင့်နေရသကွဲ့…။ အော်……. စုက္ခ….စုက္ခ…။ ဘယ်သူ့မှ အတိုနဲ့ မထိုးပါဘူးကွယ်…။ ရွာထဲက ရှိတဲ့ ကိုပါလေရာကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူး…။ ဟိုတစ်ခေတ်က ဝတ္ထု စာအုပ်တွေမှာ ရှေ့ဆုံးကနေရေးကြသလို ” ဘယ်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ…။ တိုက်ဆိုင်မှုရှိလျှင် ခွင့်လွှတ်ပါ” လို့ ရေးပေးရဦးမှာလား…။ အဲဒါကြောင့် ဘယ်သူ့ ဘယ်ဝါ့ကို မှ မပြောရဲပါဘူးကွာ…။ အားလုံးကိုပြောတာပါ…။ အဲဒိအထဲမှာ ဟော့ဒိက နေ၀န်းနီလည်းပါပါတယ်…။ ဒို့လူမျိုးတွေမှာ ပညာလေးနဲနဲ တတ်လာရင် အဲဒိလိုလူမျိုးတွေ ကများတယ် …။ ရေးထားတာကကြာပါပြီ..။ ခုမှ စာအုပ်ဟောင်းထဲကတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ…။
ငပိချက် မြင်လို့ ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ဝင်လာခဲ့တာ ကဗျာ ငပိချက်ပေကိုး…..။
ကဗျာ ငပိချက်လဲ ငရုတ်သီးထောင်းလေးနဲ့ ဝင်ချက်စားလိုက်ပေါ့ ကိုရဲအောင်ရယ်။
လောကမှာ အားလုံးတွေက တိုက်ဆိုင်နေတာချည်းပါပဲ..၊ ဒွတ်ခ ဒွတ်ခ ဒွတ်ခ ။
ထိုးလိုက်ပြီ ဘယ်သူအထိုးခံလိုက်ရလည်းမသိဘူး ကလောင်နဲ.
လူငပိချက်ကတော့ … သူများ မျက်မုန်းကျိုးပေမဲ့ … စားစရာ ငပိချက်ကတော့ .. အရမ်းစားလို့ကောင်းတယ် ဟီးဟီး :D :D
ဦးနီက မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ရေးနေတဲ့ စာရေးဆရာ နေဝန်းနီ လား ခင်ဗျ..။
အိမ်း … ဟုတ်သကွဲ့ …. နာမည်ကျော် ဆရာကြီး နေ၀န်းနီဆိုတာ ဦးလေးပဲ … :D :D
ငါပါတတ်၏ ..။ ရွာအသိ………။ ။
အဲဒီလိုလူမျိုး ကျွန်တော်တို့မြို့မှာလည်းရှိတယ်ဗျို့ ။ အားလုံးမှာသူပါတယ် ။ အောက်ခြေကပါတာမဟုတ်ဘူးနော် ။ ဥက္ကဌမဟုတ်ရင် အတွင်းရေးမှူးတဲ့ဗျို့ ။ ဘယ်အဖွဲ့မှာမဆို ပါလေရာငပိချက်ဗျ ။ ကဗျာလေးကိုအရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာ ။ ။
ဟုတ်လား ကိုဘလှိုင်ရေ…….. ဘယ်မဂ္ဂဇင်းမှားလဲဗျ…။ ကျွန်တော့်စာတွေက ဘယ်ကမှ မရွေးလို့ အပယ်ခံ စာလေးတွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာ တင်နေရတာပါ…။ ကျွန်တော် နာမယ်ပြောင်းသုံးလိုက်မယ်လေ… ကျေးဇူးပဲ..။ အဲဒိမဂ္ဂဇင်းလေးတော့ ပြောပြပေးပါ………။ ကျွန်တော်တို့ဆီက စာအုပ်စုံအောင်မရောက်ဖူးဗျ……